musha nyika dzakabatana Singers John Legend Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yemuimbi weAmerica anozivikanwa kwazvo se "John Legend". Yedu John Legend Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hongu, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevane mweya mweya vanoita venguva yake. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga John Legend's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
John Legend Upenyu hwepakutanga uye Yepamberi Yemhuri:
Kutanga kubva, John Roger Stephens akaberekwa pazuva re28th raDecember 1976 kuguta reSkyfield kuOhio, USA. Ndiye wechipiri pavana vaviri akazvarwa kuna amai vake, Phyllis Stephens uye kuna baba vake, Ronald Stephens Sr.
Kutenda kuberekwa patsika yemusango munyika yemahara, Legend inyika inodada yeAmerican yedzinza rakavhengana nemidzi yeAfrica-American. Akakurira mumhuri yepakati-yemhuri kumashure kuguta rake rekuzvarwa muScreenfield uye akakurira padivi pehama dze3; Ronald Stephens II, Vaughn Anthony Stephens na Phyllis "Missy" Stephens.
Kukura mumhuri ine mimhanzi ine chipo-chevashandi, Legend aive akatenderedzwa nezviitiko zvakamumutsa kuti apupurire chokwadi mune zvinonakidza mimhanzi. Amai vake vaive director wekwaya yechechi uku ambuya vake nababa vake vekubereka vaitamba nhengo uye nengoma zvakateedzana mukereke imwe chete. Hazvina kutora nguva refu Legend asati apinzwa mukwaya yechechi uye akatanga kutora piano zvidzidzo achiri mudiki.
John Legend Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Sezvo mudiki Legend akakura mumakore, ndizvo zvaakaitawo zvido zvake mumimhanzi nekutsvaga ruzivo. Akagamuchira dzidzo yepuraimari kuburikidza nedzidzo yekumba uye akafambira mberi kuenda kuSpanishfield North High Chikoro paakanga akura zera 12. Kwaive kuNorth High chikoro uko kushingairira kwaLegend nekuzvipira kwake pakuwana ruzivo kwakamuona apedza saruti.
Akaenderera mberi nekufunda chiRungu achisimbisa zvinyorwa zveAfrican-American kuUniversity yePennsylvania kunyangwe achipihwa kuHarvard University uye kudzidza kuGeorgetown University. Nzira iyo Legend yaakazviona, Georgetown University yaive kure nezvaaida iye Harvard uye University of Pennsylvania vaive veIvy League. Nekudaro, akagadzirira kune yekupedzisira iyo yainyanya kufadza kwaari.
John Legend Yekutanga Basa Rehupenyu:
Nhoroondo yebasa raLegend rekutanga mumimhanzi rakadzokera kumazuva ake ekoreji paakashanda semutungamiri uye mutungamiriri wemimhanzi weboka remimhanzi rakanzi 'Counterparts'. Akaenderera mberi achiratidza semunhu anoridza piyano muLauryn Hill mu "Zvese zvinhu Zvese" asati apedza kudzidza mu1999.
VERENGA Cardi B Kukura Kwemunhu Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Mushure meizvozvo, Legend akabatanidza kushanda seye manejimendi manejimendi weBoston Consulting Group nekunyora, kurekodha uye kugadzira mimhanzi yake. Muimbi wekuimba akazoburitsa maalbum maviri akazvimirira; demo rake rekuzvidaidza (2000) & Rarama kuJimmy's Uptown (2001) iyo yaakatengesa pamitambo yake uye akatarisira kuwanikwa nerekodhi rekodhi.
John Legend Road KuMukurumbira Nyaya:
Legend akasangana nekushandura kwake kuita mukurumbira paakaziviswa kwaari Kanye West muna 2001. Pamusana pemusangano, Legend akazova mutsigiri wezwi uye akashanda semunhu anoiridza piano kuWest uye maartist mumatunhu eWest kusanganisira Alicia Keys, Talib Kweli, neBlack-Eyed Peas.
Nekukurumidza kumberi kwa2004, Legend akatorwa neWest semuimbi werap pane yake yekutanga albha "Iyo Koreji Kudonhedza". Iyo gig yakaenderera mberi kubatsira Legend kuchengetedza kusaina kuWest's label (GOOD Records) iro basa rekutanga raive kuburitsa Legend's debut album.
John Legend Rise To Mukurumbira Nyaya:
Maitiro akaiswa kuti ave nechokwadi chekubudirira kweLegend's debut album "Get Lifted" yakabuda nekukurumidza zvekuti pombi yemimhanzi yakaburitswa muna Zvita 2004. "Simudzwa" yakagamuchirwa zvakanaka muUS uye yakaenda pasirese nekubudirira kwakakosha kwekutengeserana.
Chii chimwe? Iyo albam yakahwina iyo 2006 Grammy Mubairo weYakanakisa R&B Album uye yakawana Legend mbiri mibairo yeakanakisa Nyowani Artist uye Akanyanya Male R&B Vocal Performance. Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora, Legend muimbi anokunda mubairo uye mutambi uyo anodada ari pakati pemazwi akanakisa muindasitiri yemimhanzi. Ndiye zvakare wekutanga mutema murume kuhwina Emmy, Grammy, Oscar, & Tony Awards. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
John Legend Hukama Hupenyu:
Achienderera kuhupenyu hwerudo hwaJohn Legend, iye ane nhoroondo yekufambidzana nekuti akachengeta chikamu icho chehupenyu hwake hwepachivande kure nepepanhau. Zvisinei, kuferefetwa kwakadzama kunoratidza kuti Legend aive nevanasikana vatatu asati arovera kumukadzi wake Chrissy Teigen. Vasikana vacho vanosanganisira mamodheru - Jessica White naDanielle Abreu pamwe neNigerian catwalk - Tayo Otiti.
Chrissy Teigen akasangana neLegend muna 2007 paakabata nyeredzi senge rudo rweartist muvhidhiyo yemumhanzi yenziyo yake "Stereo". Vakasimbisa chisungo uye vakapfimbana mushure mekuroora mu2013.Mubatanidzwa wavo unokomborerwa nevana vaviri panguva yekunyora. Ivo vanosanganisira mwanasikana Luna Simone uye mwanakomana Theodore.
VERENGA Lil Wayne Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
John Legend Hupenyu Hwemhuri:
Vaimbi vemweya vanozivikanwa kuve vakuru mumhuri uye John Legend haasarure. Tinokuunzira chokwadi nezve hupenyu hwemhuri yaJohn Legend kutanga nevabereki vake.
Nezve baba vaJohn Legend:
Ronald Stephens Sr ndibaba vaJohn Legend. Iye akazvarwa pazuva re18th raGunyana 1949 uye akashanda semushandi wefekitori panguva yehupenyu hwaLegend achiri mudiki. Ivo vanodada uye vanotsigira baba vevana vanogovana zvakafanana zvinotyisa neLegend zvakare aimbove muchengeti weNational. Kunyangwe Ronald akapatsanurwa naamai vaLegend, achiri nehukama hwepedyo nemuimbi.
Nezve amai vaJohn Legend:
Phyllis Stephens ndiamai vaJohn Legend. Iye wedzinza rakasanganiswa senge murume wake wekare-ane mhuri yakaoma. Phyllis ane ruzivo rwebasa rwekuva seamstress uye ainyanyo tarisa kudzidziswa kwedzimba kwaLegend achiri mudiki. Ane hukama hwepedyo hwaamai-mwanakomana naLegend uye anogona kugara achionekwa mumifananidzo inodiwa naye.
Nezve hama dzaJohn Legend:
Ngano ine mukoma Ronald Stephens II, munin'ina Vaughn Anthony Stephens pamwe nehanzvadzi mudiki Phyllis "Missy" Stephens. Vese vatatu mukoma nemunin'ina vakaberekwa nevabereki vamwe uye vane zvavanofarira mumimhanzi nehunyanzvi hwekugadzira. Kunyangwe vanun'una vacho vasingawanzoonekwa pamwe chete, havana kukura uye vanogara vachitsigirana.
About John Legends hama:
Kure nehupenyu hwemhuri hwaJohn Legend, sekuru nasekuru vake vakaonekwa saArthur Benjamin Stephens naMarjorie Maxine “Maggie” Smith apo sekuru vake nasekuru naamai vake ndiRaymond Eugene Lloyd naRaymond Eugene Lloyd zvichiteerana. Nekudaro, hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezve mainini vake, babamunini, babamunini, pamwe nababamunini uye nababamunini.
John Legend Chako Hupenyu:
Nhoroondo ine hunhu hwakafanana hune hunhu hweCapricorn Zodiac chiratidzo maitiro. Ane chivimbo, anoshanda, ane hanya, akatsanangudza, akarongeka, ane mutoro uye akazaruka pakuedza zvinhu zvitsva.
Kuwedzerwa kuLegend's anoshamisa persona hunhu hwake hwehungwaru hwekusaburitsa pachena kupfuura zvinodikanwa kana achitaura nezvehupenyu hwake hwega uye hwakavanzika. Zvaanofarira uye zvekunakidzwa zvinosanganisira kunyora nziyo, kupfura hoops uye kufambirana nekoreji nhabvu paTV.
John Legend Mararamiro:
Achienderera mberi nekuita kwaJohn Legend mari yake pamwe nekushandisa kwake tsika, muimbi ane mari inofungidzirwa kuti inosvika madhora makumi mana nemashanu emadhora panguva yekunyora. Icho chizere ruzivo kuti chikamu chakakura chepfuma yaLegend chinotora kwayakatangira kubva kumumhanzi wake kuedza. Chero iyo Legend inoshayikwa mumimhanzi mari inogadzirirwa mune ake endorsement madhiri uye mari dzekudyara izvo pamwe chete zvinomuita kuti azive mamirioni emadhora gore rega.
Nekudaro zviri pasina kutya nekufarira iyo Legend inayo uye inochengetedza yakasarudzika $ 14 mamirioni imba kuBeverly Crest nharaunda muLos Angeles. Iyo 3 imba yekuchengetera inogara pane 8520 mativi mana epasi uye inozvirumbidza nezvinhu zvakaita sedziva hombe rekushambira, dzimba dzekugezera zvisere, dzimba dzekurara shanu, bhiridha rine bar, theatre pakati pevamwe. Kuseri kwemasuwo eimba huru kune mota dzekunze idzo dzinotaura zvakanaka nezve mararamire aLegend. Kukwira kunogadzirwa nemhando dzakadai seChevrolet, Audi, pakati pevamwe.
John Legend Untold Chokwadi:
Kufunga uye kuziva hakuna kufanana. Tsvaga pazasi zvinhu zvisingazivikanwe kana zvisingataurike chokwadi zvinoputira yedu John Legend mwana nyaya uye Biography.
Ngano inopihwa kunwa zvinwiwa zvinwiwa zvine mwero uye kuputa inhalants kunze kweCigareti. Nekudaro, haatenderi mutsika panguva yekushanya nekuti ane izwi risina kusimba.
Muimbi akakurira mumhuri yechitendero zvekuti akakura achiimba kuimba kwechechi achiri mudiki. Muimbi haasati ambotsauka kubva pakurerwa kwakadaro kwechitendero sezvaanotsvaga kuparadzira Christain kutenda kuburikidza nenziyo dzake.
Icho chikonzero shure kwezita rake reunyanzvi:
Muimbi wemweya akabhabhatidza John Roger Stephens akatora zita reunyanzvi "John Legend" nekuti akagamuchira mazwi mazhinji ekuti anoimba kunge murume mukuru.
Nhoroondo ine matatto anoenderana nemukadzi wake ayo anotaurisa avo rudo uye kuonga kwemhuri. Paruoko rwaLegend pane chinyorwa chakanyorwa kuti "Chrissy Luna Miles" mukuremekedza mudzimai wake nevana vaviri nepo mudzimai waLegends Chrissy Teigen achiverenga "John Luna Miles."
Arguingly mumwe weanopa mubayiro kukunda maartist, Legend yakahwina mubairo wakakwana we31 mibairo kunze kwe41 panguva yekunyora. Iyo mibairo inosanganisira mbiri BET mibairo, Grammy Tuzo, shanu dzeMweya Chitima Makwikwi, maviri NAACP Image Award, mumwe weGlobal Globe Award pakati pevamwe.
Nhoroondo haingori mudhanzi chete asi mutambi anohwina mubairo uyo akaita kuratidzira muhuwandu hwakakosha mafirimu uye terevhizheni akateedzera ayo anosanganisira Sesame Street (2006), A Legendary Christmas naJohn naChrissy (2018) uye Master of Hakuna terevhizheni.
Thanks for reading vedu John Legend Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!